Wednesday January 22, 2020 - 21:40:46 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xaalad qoob gariir ah ayaa usoo gashay askarta iyo saraakiisha maamulka isku magacaabay Hirshabelle ee ku sugan degmada Mahadaay oo katirsan gobolka Sh/dhexe.
Wararka ka imaanaya Sh/dhex ayaa sheegaya in askarta iyo saraakiisha dowladda ee ku sugan Mahadaay ay caawa maqribkii uhoyaadeen dhanka saldhigga ciidamada Burundi ee kuyaal halka loo yaqaan saraha duugan, cabsidan soo wajahday dabadhilifyada ayaa timid kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in ciidamada AMISOM ay degmadaas isaga bixi doonaan.
Guddoomiye ku xigeenka Mahadaay ayaa warbaahinta u sheegay in ay kulan laqaateen saraakiisha ciidamada Burundi una xaqiijiyeen in ay geeddi ka yihiin degmada, dad ku sugan Sh/dhexe waxay sheegeen in labadii maalmood ee lasoo dhaafay saldhigyada ciidamada AMISOM laga dareemayay dhaq dhaqaaq waxaana halkaas ku degayay diyaarado.
Horraantii bishan ayuu Ergayga Ururka Midowga Afrika uqaabilsan Soomaaliya wuxuu sheegay in marka lagaaro bisha Febaraayo sanaddan kun askari AMISOM ah laga saari doono dalka balse ma sheegin halka laga saari doono iyo dowladda ay katirsan yihiin.
Sanaddii lasoo dhaafay ayay dowladda Burundi ka qeylla dhaamisay qaraar kasoo baxay UN-ka kaas oo farayay in kun kamid ah ciidamadeed ay ka saarto Soomaaliya, lama oga in ciidamada shisheeye ay kawada bixi doonaan deegaannada ay uga suganyihiin Sh/dhexe iyo inkale.